ဇာနီကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေမှ “အခြားပယောဂများ” ကိုသုံးသပ်ခြင်း၊ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဇာနီကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေမှ “အခြားပယောဂများ” ကိုသုံးသပ်ခြင်း၊
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘဲ “အခြားပယောဂများ” ကြောင့် ဟုဆိုသည်။ မန္တလေးတွင် ဘာသာရေးပဋိပက္ခမဖြစ်ပေါ်မှီ ကျပ်သိန်းတစ်ရာခန့် အလွဲသုံးစားပြုလုပ်မှုဖြင့် ဇွန်လ ၁၉၊ ၂၀၁၄ တွင် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဖမ်းဆီးထားသော သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်၏အမှုအား ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရမည်းသင်းထောင်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိ ပုဗ္ပသီရိမြို့နယ်တရားရုံးသို့ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်လာစဉ် ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်က “ကျွန်တော်သာသနာရေးလုပ်တာ အခုအချုပ်ခံရတဲ့သဘော ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်တော် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ထမ်းဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မဟုတ်တာ မလုပ်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ “မှန်ကန်တဲ့အတွက် ရပ်တည်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်သာသနာကိစ္စ ဆောင်ရွက်သော်လည်းပဲ ဒီနေ့ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို စစ်ပြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပက်သတ်လို့ စစ်ဆေးပြီးသားကိစ္စကို အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်တာ။ ဒါဟာအလွန်ပဲ မတရားပြုလုပ်မှုလို့ ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ လူထုကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ရဟန်းသံဃာတော်များ၊ သံဃာ့နာယက ဆရာတော်ကြီးများ၊ ဆရာတော် သံဃာတော်အပေါင်းတို့ဟာ မှန်ကန်ရပ်တည်တဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ရပ်တည်ပေးပါ။ ကျွန်တော့်ကို ကူညီစောင့်ရှောက် ကြပါ။ သမာဒေ၀ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များက စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ ကျွန်တော် သစ္စာဆိုရဲပါတယ်။ ငါးပြားတစ်စေ့ကအစ ဘဏ္ဍာငွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်တာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ရပ်တည်ချက် မှန်ကန်သော်လည်းပဲ သမ္မတရဲ့အမိန့်ကို မနာခံဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်တာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မှတ်ချက်။ ဝန်ကြီးဟောင်းသည် တိုက်ပုံအဖြူဝတ်ထားပြီး၊ တိုက်ပုံအဖြူဝတ်ရဲများဖြင့် ကာရံလမ်းလျှောက်လာသည်။ တရားရုံးမှဗင်ကားသို့အပြန်၊ လမ်းလျှောက်ရင်း သတင်းထောက်များကို ပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးဟောင်းကို ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်စေပဲ လက်ထိပ်မသုံး ယဉ်ကျေးစွာ ရုံးထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
– အထက်ပါ လာဘ်စားမရှိနာမည်ပျက်မရှိသော ဝန်ကြီးဦးဆန်းဆင့်၊ ရုတ်တရက် ကျပ်သိန်းတရာခန့် လာဘ်စားမှုဖြင့် အလုပ်မှဖြုတ်၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချ၊ တရားရုံးထုတ်ခြင်းကိုလည်း နားမလည်နိုင်ပါ။
– ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏ ကျောင်းတော်ပိုင်ဆိုင်မှု သံဃာများပြသနာကို ညအချိန် ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး၊ သံဃာ၅ဦးအား ဖမ်းဆီး၊ လူဝတ်လဲပြီး၊ တရားရုံးထုတ်၊ ရဟန်းပြန်ဝတ်ခွင့်ပြုခြင်းကိုလည်း နားမလည်နိုင်ပါ။
– အစိုးရနှင့် တပ်မတော်က သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်ယာမြေဧက စုစုပေါင်း ၄၇၀,၀၀၀ ကျော်အနက် ဧက ၃၅၀,၀၀၀ ကျော်အား အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ စွန့်လွှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း သမ္မတက လွှတ်တော်သို့ သ၀ဏ်လွှာပေးပို့ ခြင်းကိုလည်း နားမလည်နိုင်ပါ။
– ရုတ်တရက် မန္တလေးမြို့တွင် ဘာသာခြားပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ အုပ်စုလိုက်ရိုက်နှက်မှုများကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အချိန်မီထိန်းနိုင်ခဲသည်ကို လေးစားမိသည်။ မြိုနယ်ခြောက်မြို့နယ်ကို ညမထွက်ရအမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက အစိုးရထံမှ ရှင်းလင်းချက် မရသေးဟု ပြောသည်။ ဖြစ်ရပ်များကို နားမလည်နိုင်ပါ။
– တရုပ်ပြည်သို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အဖွဲ့သွားရောက်ပြီး စာချုပ်များစွာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ ဘာတွေရေးထိုးခဲ့ကြောင်းကိုလဲ နားမလည်နိုင်ပါ။
– နောက်ကွယ်မှအင်အားကြီးသောအဖွဲ့ “အခြားပယောဂများ”ကြောင့် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေရခြင်း။
– လွှတ်တော်သို့သတင်းပို့၊ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရမှု သိပ်အဆင်မပြေခြင်း။
– စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအား ကိုင်တွယ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ။
– လယ်ယာမြေ၊ အိမ်ခြံမြေ ဈေးကြီးအောင်လုပ်သူများ၊ သိမ်းဆည်းထားသူများကို ဘာမှမလုပ်နိုင်။
– ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုကော်မတီ(ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ MIC, FIC) လိုင်စင်၊ပါမစ်ပေးခြင်းကို စနစ်တကျဖြေရှင်းရန်။
– နယ်စပ်၊ သင်္ဘောဆိပ်၊ လေဆိပ်များမှ တရားမဝင် တင်ပို့ကုန်များစွာ အခွန်လွတ်နေခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်။
– လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရထားသူ ခရိုနီကုမ္ပဏီကြီးများအား အခွန်မကောက်နိုင်ခြင်းကို ဖြေရှင်းရန်။
– အစိုးရဘတ်ဂျတ်နှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး နိုင်ငံတကာချေးငွေများစွာကို ကော်မတီဖွဲ့ဖြေရှင်းရန်
– လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု များကို ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေအရ အရေးယူရန်
– ဦးပိုင် (တပ်မတော်စီးပွားလုပ်ငန်းများ) အစိုးရနှင့်မဆိုင်ပဲ၊ စစ်တပ်ကသာကိုင်တွယ်ခြင်း ..အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
– အိနှိုယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ၊ အမေရိကန်၊ အီးယူနှင့်အင်္ဂလန်
– ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့်အာစီယံနိုင်ငံများ
– ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများ
– ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အိုင်အမ်အက်ဖ်၊ ဂျိုင်ကာ နှင့် အင်ဂျီအိုအဖွဲ့များ
– တရားရုံး၊ တရားသူကြီးများ တရားမမျှမတဖြစ်နေမှု
– ပြည်သူရဲများ အဂတိလိုက်စားမှု
– ကျေးရွာ၊မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်း/ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းများ လာဘ်စားခြင်း
– ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ လက်ဆောင်ပေးရခြင်း
– ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး နှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
– တရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများကို မိုဘိုင်းအဖွဲ့ဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်း
– ရန်ကုန်မြို့၊ စည်ပင်နယ်မြေအခက်ခဲများ
– လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မြို့များမီးမပျက်ရေး
– ဟိုက်ဝေးလမ်း ကားမှောက်မှုများ
– အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (အလုပ်ကိုင်ရရှိရေး)
– ပြည်ပအလုပ်အကိုင်များ (အလုပ်သမား၊ အိမ်စေ) ..စသဖြင့် မြောက်မြားစွာရှိပါသည်။
Images: Eleven Media
Tags: ဇာနီကြီး, ရခိုင်
ဇာနီကြီး – တရုပ်ဆီက ငွေမချေးပါနဲ့တော့၊ ဂျပန်၊ဂျာမဏီတွေဆီကပဲ ချေးပါခင်ဗျာ (1)
2 Responses to ဇာနီကြီး – မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေမှ “အခြားပယောဂများ” ကိုသုံးသပ်ခြင်း၊
U Khae on July 5, 2014 at 8:38 pm
He is not capable. He is not by himself.
He can not cope with his duties.
he can not perform his duty well. enough.
He is only ‘ chatter-box ‘ .
the whole of his team is ‘ out of character and of low-quality ‘.
Myanmar is getting worse and worse.
I expect them very much ,3years ago. .. really Myanmar is not persevere and inconsistent.
and easy to distracted. very emotional .
the whole country and people are …..’ misguided for many years. and they are now ‘ full of anxiety and stress on daily basis. And they lose their ‘ aim and goal. ‘ . They are rudderless.
No good leader(s). and is governed by very poorly performed people.
the military is also very powerful in its territory.
OUTSIDE world, they are just chicken. They have no really sophisticated hi-tech weaponry. And needalot of training,.
so overall, …speaking Thein Sein Government is failing and failing. The whole country is failing .
don’t be deluded yourself with ‘ Golden Myanmar ‘ . Shwe Myanmar ‘ .
Don’t get deluded.
Don’t get deluded with ‘ our4rivers and two mountainous ranges ‘ .
Don’t you think . ‘ here I am pessimistic ‘ .
Avoid ‘overoptimism ‘ . It is dangerous and it will make country ‘ sink deeper and deeper ‘ .
‘ Lone Parrr Parrrr Mae’ . The whole country will get ‘ Lone Parr Parrrrr ‘ .
Be assertive and do something to ‘ GET OUT of from this quagmire state of our country ‘ ! ! ! ! ! !
After more than three years of watching them. ( the government and its ‘ advisory team.. ) . They all are useless and of very low-quality poor performance. Some advisers are to be sacked. They should not be in advisory committee anymore. Get Rid of Them.
Well……one year left only and ……..The country will be sinking . sinking and it will be finally falling into great canyon and the whole country will be ‘ ………………. ‘ . Even noble Buddhism can not save our own people. HHhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. …
Ko Zaw on July 8, 2014 at 1:14 pm
မန္တလေးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်သိ တာဝန်ကျေပွန်သော မန္တလေးသူ မန္တလေးသားများသို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများသည် လူတစ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ဟု သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြောကြားခဲ့သည်။